အမေးအဖြေများ - ChangZhou Plet ပုံနှိပ်နည်းပညာ CO, .LTD
SPS squeegee ၏အဓိကအမျိုးအစားများဘာတွေလဲ?
(ထောက်ခံမှုပန်းကန်မပါဘဲ) 1. ရိုးရာက M-type ကို squeegee: SPS squeegee သုံးခုကိုအဓိကအမျိုးအစားသို့ခွဲခြားထားပါသည်။ 2, FGB ဖိုက်ဘာမှန် scraping ။ တစ်ဖက်သတ်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ scraping သွားဖုံး AS 3, ။
အဆိုပါ SPS squeegee များ၏ရော်ဘာစုတစုအများအပြားမော်ဒယ်များရှိပါတယ်?
နှစ်ခုမော်ဒယ်များ, တဦးတည်းလက်ရှိတွင်ရှိပါတယ် M-type နှင့် FGB ဖိုက်ဘာမှန်ပြားများတွင်အသုံးပြု M-type အမျိုးအစားရော်ဘာဖြစ်ပါသည်, နှင့်အခြားသောမှာ AS-ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ (အကျင့်, ပိုပြီးအရည်ပျော်ပစ္စည်း-ခံနိုင်ရည်နှင့်ထို့ထက် ပို. wear- အတွက်အသုံးပြုတဲ့ PLUS ရော်ဘာဖြစ်ပါသည် ) ခံနိုင်ရည်။
ယင်းက M type ကိုခြစ်ကော်၏အရွယ်အစားသတ်မှတ်ချက်များဘာတွေလဲ?
M ကမော်ဒယ်တွေအထူသည်နှင့်အညီ * 50 9, * 30 ရက် 9, * 40 7, * 25 5,5* 20 အစွန်အဖျားထူရှိသည်, ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။
9 * 50 သတ်မှတ်ချက်များ scraping ရိုးရာမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်စက်မှုလုပ်ငန်း FGB ဖိုက်ဘာမှန်, ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီဖြတ်တောက်၏အရှည်။ ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။
ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ squeegee AS ၏ရှုထောင့်ကဘာတွေလဲ?
ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီသတ်မှတ်ချက်များ7* 50 scraping ကာဗွန်ဖိုက်ဘာအဖြစ်ရိုးရာမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်, အရှည်။ ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။
3D: STP, XT; CAD: 2000 ဗားရှင်းထုံးစံအချိန်:5အလုပ်လုပ်ရက်အတွင်း
ခြစ်ခြင်း၏သုံးမျိုးမြေပြင်နိုင်ပါတယ်။ M ကမော်ဒယ်နှင့် FGB မော်ဒယ်တစ်ခုတည်းအများဆုံးကြိတ်ပမာဏကို 0.5mm (200 ကွက်ကြိတ်ဘီး) ။ တစ်ခုတည်းအများဆုံးကြိတ်ပမာဏကို 0.1mm scraping ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ AS (ဘီး, ကာဗွန်ဖိုင်ဘာဘုတ်အဖွဲ့ကြိတ် 200 ကွက်ကိုလည်းမြေပြင်နိုင်ပါတယ်) ။ ရုံတက်ကိုအသုံးပြုထားပြီးသော squeegee အရည်ပျော်ပစ္စည်းအတွင်းပိုင်းတွေအများကြီးပါရှိသည်။ ဓားအစွန်း၏ခိုင်မာသောချက်ချင်းမြေခံရဖို့လည်းနိမ့်သည်။ ဒါဟာကြိတ်မတိုင်မီသာ 24 နာရီကြာပါတယ်။
FGB ဖိုက်ဘာမှန်ခြစ်ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်သမားရိုးကျလ်တာသို့ကာဗွန်ဖိုက်ဘာခြစ် AS မှဘယ်လိုနေသလဲ?
အဆိုပါ FGB ဖိုက်ဘာမှန်ခြစ်ခြင်းနှင့် AS ကာဗွန်ဖိုက်ဘာခြစ်နှစ်ဦးစလုံး 1.2mm အထူရှိပါတယ်။ သူတို့ကကျနော်တို့ပေးနိုငျသော 8 မီလီမီတာအထူ pad ပါအတူထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
SPS Squeegee ၏ကို Maintenance?